Barcelona Oo Xiddigii Mustaqbalka Man City La Heshiisay & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa - Laacib
HomeBundesligaBarcelona Oo Xiddigii Mustaqbalka Man City La Heshiisay & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Erling Braut Haaland ayaa doorbidaya inuu Real Madrid u wareego xagaaga dambe haddii uu Borussia Dortmund ka tago walow uusan wali go’aan ka gaadhin mustaqbalkiisa. (Goal)
Newcastle United ayaa hoggaaminaysa tartanka saxeexa garabka Barcelona ee Ousmane Dembele iyadoo sidoo kale Man United xiiso u qabto 24 sano jirkaas heshiiskiisa Camp Nou xagaaga 2022 dhacayo. (Mundo Deportivo)
Manchester United ayaa u wareegi doonta saxeexa tababaraha Ajax ee Erik ten Hag haddii ay awoodi weydo inay Pochettino ka hesho Paris St-Germain. (Mail)
Barcelona ayaa suuqa January si weyn u doonaysa saxeexyo weerarkeeda xoojiya waxayna u dhaqaaqi kartaa xiddigaha Man United ee Jesse Lingard iyo weeraryahan Edinson Cavani. (Mundo Deportivo, via the Sun)
Leeds United khadkeeda dhexe ee Kalvin Phillips ayaa diidi doona kooxda ay xifaaltamaan ee Man United xagaaga dambe si uu baaqi ugu sii ahaado Elland Road. (Star)
Manchester United ayaa ku dhaw saxeexa tababare Ralf Rangnick oo kumeel gaadh u qabanaya ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka, sidoo kale Ralf Rangnick ayaa qayb ka noqon doona go’aanka tababare isaga bedela oo rasmi ah Old Trafford lagu keenayo. (Star)
Manchester City weeraryahankeeda Ferran Torres ayaa bartilmaameed u ah Barcelona, kooxda Camp Nou ayaa xataa heshiiska shaqsiga ah la gaadhay 21 sano jirkaas balse aan wali Man City la xidhiidhin. (Marca)
City ayaa xidhiidh la samaysay weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema oo 33 sano jir ah. (Mirror)
Mikel Arteta ayaa dafiray in Arsenal ay bisha January dhagaysan doonto dalabaadka laga soo gudbinayo Nicolas Pepe. (Metro)
Aston Villa ayaa muhiimada siin doonta saxeexyada daafac dhexe iyo bur-buriye khad dhexe ah xilli tababare Steven Gerrard uu doonayo inuu soo xoojiyo safkiisa. (Football Insider)
Tottenham tababaraheeda Antonio Conte ayaa sheegay inuu qiimayn ku samaynayo ciyaartoydiisa kahor inta uusan maamulka kooxda la hadlin. (Mirror)
Fulham weeraryahankeeda Aleksandar Mitrovic ayaa lala xidhiidhinayaa Juventus. (Tuttosport, via the Sun)